Hemorrhoid उपायहरु | कति छिटो राहत प्राप्त गर्न
बवासीर हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरू दुर्व्यवहार र अन्याय सहनु, लक्षण संग महत्वपूर्ण बेचैनी गर्न नम्र खुजली देखि दायरामा गर्न सक्ने. यो एक चिरस्थायी वा दोहोरिने अवस्था हुन सक्छ, त्यसैले यो अवस्था बारम्बार अप चमक मामला मा आफ्नो विकल्प थाहा बुद्धिमानी हो. निम्न प्राकृतिक hemorrhoid उपायहरु प्रोटोकल तपाईंलाई मदत गर्नेछ तपाईंको लक्षण राहत., को बवासीर हटाउनु र भविष्य पुनरावृत्ति को संभावना कम.
आहार र जल सेवन सुधार
तपाईं लिनुपर्छ पहिलो र सजिलो चरण पानी प्रशस्त पिउने छ. यो hydrated राख्न हुनेछ, कब्जियत जोगिन, र मदत कुराहरू थप सजिलै पाचन पर्चा लैजान.
यो कुरा सार्दा राख्ने क्रममा फाइबर मा एक आहार उच्च खान महत्त्वपूर्ण. जब आफ्नो आंत्र उन्मूलन तल slows, मल पारित गाह्रो हुन सक्छ, कारण बवासीर. बवासीर को छुटकारा प्राप्त गर्न, तपाईं सम्म गर्नुपर्छ आफ्नो फाइबर सेवन 35 प्रति दिन फाइबर को ग्राम. जामुन जस्तै फाइबर-धनी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने प्रयास, नेभारा, avocados, सिमी, पागल, कटुस स्क्वास, सन वा chia बीउ, वा quinoa.
शौचालय बानीहरु सुधार
एक आंत्र आन्दोलन भइरहेको बेला फाटो छैन, यो रूपमा निश्चित आफ्नो लक्षण बुरा गर्नेछ. तपाईं straining बिना मल पारित गर्न सक्नुहुन्न भने, प्रयोग सुझावहरू सबै यो खुराक मा पहिलो सिफारिस, त्यसपछि अन्तिम उपायको रूपमा, Senna चिया वा सहज सार्नुहोस् ब्रांडेड चिया जस्तै प्राकृतिक रेचक औषधि प्रयास. तपाईं पनि आफूलाई राम्रो एक आंत्र आन्दोलन पछि सफा गर्न निश्चित हुनुपर्छ, बनाउन त्यहाँ केही छ कि छोडेर संवेदनशील Tissues रीस उठाउनु सक्छ छ पक्का.
व्यायाम प्रशस्त प्राप्त
ओछ्यान आलु यस सुन्न चाहँदैनन् सक्छ, तर व्यायाम रही साँच्चै तपाईं भित्र सार्ने कुरा प्राप्त र आफ्नो आंत्र आन्दोलनहरु विनियमित मदत गर्न सक्छ. प्रति दिन पनि आधा घण्टे पैदल साँच्चै फरक बनाउन सक्छ. तपाईं एक आसीन जीवन भएको छु भने पनि, अझै प्राप्त र घर मदत गर्न सक्छ वरिपरि सार्दा. त्यहाँ सुरु, र आफ्नो बाटो काम अलि बढी शारीरिक आन्दोलन हरेक दिन गर्न.
प्रोबायोटिक फूड्स र पूरक
तपाईंले पहिले नै प्रोबायोटिक पूरक गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं गर्नुपर्छ. यो राम्रो काम आफ्नो पाचन प्रणाली प्राप्त गर्न सक्छन्. केही किण्वित खाद्य पदार्थ खाने विचार, जो आफ्नो पेट वनस्पतिहरूको फलिफाप र नै Replenish गर्न मद्दत गर्नेछ राम्रो जीवाणुहरु आफ्नो जठरांत्रिय सिस्टम प्रदान, जो राख्छ सबै राम्रो कार्य.
kefir, kimchi, kombucha चिया, वास्तविक किण्वित sauerkraut, र प्रत्यक्ष जीवाणुहरु संग दही तपाईंको सिस्टम मा केहि लाभकारी जीवाणु प्राप्त गर्न सबै ठूलो विकल्प हो.
यहाँ hemorrhoid सुनिंनु मद्दत गर्नेछ भन्ने एक आवश्यक तेल मिश्रण छ: मा5एमएल गाढा ग्लास dropper बोतल, राख्नु5Cypress को घटेको,5गेरानियम को घटेको, 10 लेवेन्डर को घटेको,6Melaleuca को घटेको, 15 Sandalwood को घटेको,5Bergamot को घटेको. वाहक तेल संग बोतल बन्द माथि, यस्तो jojoba वा fractionated नरिवल तेल रूपमा, मिश्रण लागि अतिरिक्त कोठा को एक बिट छोडेर.
बोतल मा भएको dropper शीर्ष भाड र साथै तेल मिश्रण गर्न एक मिनेट लागि आफ्नो Palms बीच बोतल रोल. जब तपाईं बाथरूम जाने, एक कपास प्याड मा केही घटेको ड्रिप र गुदा खोल्ने विरुद्ध प्याड ठाँउ. नहीं खोल्ने भित्र प्याड राख्नु गर्छन्. यो प्रक्रिया हरेक समय दोहोरिन तपाईं बाथरूम प्रयोग, अर्को केही दिनको लागि. यो तेल inflamed Tissues soothe र बवासीर को सुनिंनु कम गर्न मद्दत गर्नेछ.
तपाईंले यो प्रोटोकल सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा सबै hemorrhoid उपायहरु को प्रभावकारी छ कि पाउनुहुन्छ. तपाईं पूर्ण प्रोटोकल पालन भने, तपाईं संभावना समस्या को एक तेज संकल्प अनुभव छौँ, र कम वा भविष्यमा inflamed बवासीर को मौका नामेट.